China AUMAN EST DUMPER mveliso kunye nabenzi | Ifoto
Ukusebenza okuphezulu kwezothutho kunye namandla okuphatha aphezulu
Uhlobo lweDrive 6 * 4 8 * 4
I-GVW / GCW 55T / 80T
Isantya esiphezulu 85/95 km / h
Ngokudibana neemfuno zobunjineli, ilori yokulahla inkunkuma i-Auman EST yenzelwe iingcali zeBenz kwaye isandula ukuphuhliswa kwaye yakhiwa ngokungqinelana nemigangatho yaseYurophu yokuqonda iindlela ezinkulu malunga nokuthembeka, ukusebenza kwamandla, ukonga amafutha, ngokukhuselekileyo, intuthuzelo kunye ukuzisa amava exabiso lezothutho oluphezulu kunye namandla aphezulu okuphatha abathengi.
Itraki inikwe amandla yiCummins entsha-injini ye-ISG entsha ene-torque ephezulu kunye nenqanaba elinamandla; Inkqubo yamandla yenzelwe kwaye ithungiwe ngeetekhnoloji zeBenz ukunika umdlalo opheleleyo kwitorque ephezulu kunye nokuqonda ukusebenza kokuhambisa okuphezulu.
I-12L injini enkulu yokufuduka
Ukukhutshwa kwe-torque ephezulu ye-2,300NM
Inkqubo yokuncedisa injini ye-iBrake ifezekisa i-370ps ubuninzi bamandla okuqhobosha izihlangu eziBanzi: Umzi mveliso wezihlangu ezibanzi kakhulu kunqunyulwe umgama nge-20%.
Ikhabhathi yamkela ubume besakhelo somzimba esidityaniswe nge-1mm yentsimbi eshinyeneyo ngeerobhothi ezichanekileyo kwaye yaphumelela uvavanyo lwangaphambili nolwangapha, uvavanyo lwamandla ophahla kunye novavanyo lwangaphambili lokungqubana.
Ukhuseleko lweNkqubo yokuKhanyisa
Inkqubo yokukhanyisa ngobusuku obuphezulu, kubandakanya isibane sedashboard, isibane segumbi lezinto, kunye nesibane sasebusuku kwipleyiti yangemuva yelayisensi, iqinisekisa ukhuseleko kwimisebenzi yasebusuku.
Isilinda esikhulu esingu-130mm esineebhegi zokuqhuba siyasetyenziswa kwaye impompo yokuqhuba ayikhutshelwanga ukuqinisekisa ubeko olulula nolubhetyebhetye kunye nokhuseleko lokuqhuba oluphezulu.
Ubume besakhelo esilungiselelwe kuyilo lohlobo lwe-U sinokuhlangabezana namandla okusebenza kunye nokunciphisa ubunzima.
Ulwakhiwo olukhulu lwenziwe ngamashiti esinyithi esomelela nge-800MPa amandla okuvelisa kunye ne-≥300HB yobulukhuni be-Brinell ukuphucula ngokuphawulekayo ukuxhathisa ukunxiba kunye nokuxhathisa umhlwa kunye nokubandisa ixesha lokuphila.
Ulwakhiwo lohlobo lwe-U olunemodeli elungileyo yokuhlengahlengiswa lisetyenziselwa ukuqonda ukulahla izinto ngokugudileyo, ngaphandle kokuthotyelwa kwemathiriyeli, kunye nokusombulula ingxaki yokulahla kancinci ngexesha lokuhambisa izinto ngokuncamathela okuphezulu.